အဖေ့ကိုချစ်တဲ့ စိတ်နဲ့ပုံမှန် မဖြစ်သေးတဲ့ ဦးနှောက်ထဲမှာ စွဲလန်းနေတဲ့ သမီးလေးကိုကြည့်ပြီး စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေတဲ့ မင်းညီ – Cele Posts
သရုပ်ဆောင်၊ ဒါရိုက်တာမင်းညီ ကတော့ အနုပညာ အလုပ်တွေကို ကြိုးစားပြီး လုပ်ကိုင်နေသလို သူ့ရဲ့ မိသားစုလေးကိုလည်း သာယာပျော်ရွှင်ဖွယ် ဖြစ်အောင် တည်ဆောက်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မင်းညီက သူ့ရဲ့ ပါရမီဖြည့်ဖက် ဇနီးလေးနဲ့အတူတူ သမီးနှစ်ယောက်၊ သားတစ်ယောက် ကို မွေးဖွား ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး သူ့ရဲ့ မိသားစုလေး ကို ပရိသတ်တွေနဲ့ မိတ်ဆက် ပေးပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ ဂရုတစိုက်ရှိတဲ့ မင်းညီတို့ မိသားစုလေးက ပရိသတ်တွေ ချစ်ခင်အားကျရတဲ့ မိသားစုလေးပါပဲ။
မင်းညီရဲ့ သမီး အလတ်လေး မှုံရွှေရည်သန့် ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းအတွင်းက နေအိမ် မျက်နှာကျက် ကနေ ပြုတ်ကျခဲ့တာကြောင့် ဦးနှောက်လှုပ် သွားခဲ့ပြီး ဆေးကုသမှုခံ ယူနေရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သမီးလေးကို အနီးကပ်ပြုစု စောင့်ရှောက် ပေးနေတဲ့ မင်းညီက အဖေ့ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ စွဲလန်းနေတဲ့ သမီးလေးကိုကြည့်ပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်ရကြောင်းကို
” ဖေဖေ့လက်လေးကို ကိုင်ထားချင်တာ… တဲ့… အဖေအလုပ်လုပ်တဲ့ဘေး….နေချင်လို့… ပုံမှန်မဖြစ်သေးတဲ့ ဦးနှောက်ထဲမှာ… အဖေ့ကို ချစ်တဲ့စိတ် အပြည့်နဲ့… စွဲလန်းနေတဲ့သမီးလေး…. အမြန်… ပုံမှန်.. ပြန်ဖြစ်စေချင်မိတယ်….” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ မျှဝေပေးထားပါတယ်။
မင်းညီရဲ့ သမီးအလတ်မလေး ကတော့ ကြီးကြီးမားမား ဒဏ်ရာမရရှိ ပေမယ့် ဦးနှောက် လှုပ်သွားတဲ့ အရှိန်ကြောင့် ဘာစားစားအန်ပြီး နေထိုင်မကောင်း ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ပရိသတ် ကြီးလည်း မင်းညီရဲ့ သမီးလေး အမြန်ဆုံးနေကောင်း သက်သာဖို့ ဆုတောင်းပေး ကြပါဦးနော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီး အားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေး တစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေး လိုက်ပါတယ်။
အဖကေို့ခဈြတဲ့ စိတျနဲ့ပုံမှနျ မဖွဈသေးတဲ့ ဦးနှောကျထဲမှာ စှဲလနျးနတေဲ့ သမီးလေးကိုကွညျ့ပွီး စိတျမကောငျး ဖွဈနတေဲ့ မငျးညီ
သရုပျဆောငျ၊ ဒါရိုကျတာမငျးညီ ကတော့ အနုပညာ အလုပျတှကေို ကွိုးစားပွီး လုပျကိုငျနသေလို သူ့ရဲ့ မိသားစုလေးကိုလညျး သာယာပြျောရှငျဖှယျ ဖွဈအောငျ တညျဆောကျထားတာ ဖွဈပါတယျ။ မငျးညီက သူ့ရဲ့ ပါရမီဖွညျ့ဖကျ ဇနီးလေးနဲ့အတူတူ သမီးနှဈယောကျ၊ သားတဈယောကျ ကို မှေးဖှား ပိုငျဆိုငျထားပွီး သူ့ရဲ့ မိသားစုလေး ကို ပရိသတျတှနေဲ့ မိတျဆကျ ပေးပွီးသား ဖွဈပါတယျ။ တဈယောကျကို တဈယောကျ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးနဲ့ ဂရုတစိုကျရှိတဲ့ မငျးညီတို့ မိသားစုလေးက ပရိသတျတှေ ခဈြခငျအားကရြတဲ့ မိသားစုလေးပါပဲ။
မငျးညီရဲ့ သမီး အလတျလေး မှုံရှရေညျသနျ့ ကတော့ ပွီးခဲ့တဲ့ ရကျပိုငျးအတှငျးက နအေိမျ မကျြနှာကကျြ ကနေ ပွုတျကခြဲ့တာကွောငျ့ ဦးနှောကျလှုပျ သှားခဲ့ပွီး ဆေးကုသမှုခံ ယူနရေတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ သမီးလေးကို အနီးကပျပွုစု စောငျ့ရှောကျ ပေးနတေဲ့ မငျးညီက အဖကေို့ခဈြတဲ့စိတျနဲ့ စှဲလနျးနတေဲ့ သမီးလေးကိုကွညျ့ပွီး စိတျမကောငျးဖွဈရကွောငျးကို
” ဖဖေလေ့ကျလေးကို ကိုငျထားခငျြတာ… တဲ့… အဖအေလုပျလုပျတဲ့ဘေး….နခေငျြလို့… ပုံမှနျမဖွဈသေးတဲ့ ဦးနှောကျထဲမှာ… အဖကေို့ ခဈြတဲ့စိတျ အပွညျ့နဲ့… စှဲလနျးနတေဲ့သမီးလေး…. အမွနျ… ပုံမှနျ.. ပွနျဖွဈစခေငျြမိတယျ….” ဆိုပွီး သူ့ရဲ့ ဖစျေ့ဘုတျစာမကျြနှာမှာ မြှဝပေေးထားပါတယျ။
မငျးညီရဲ့ သမီးအလတျမလေး ကတော့ ကွီးကွီးမားမား ဒဏျရာမရရှိ ပမေယျ့ ဦးနှောကျ လှုပျသှားတဲ့ အရှိနျကွောငျ့ ဘာစားစားအနျပွီး နထေိုငျမကောငျး ဖွဈနတောကို တှရေ့ပါတယျ။ ပရိသတျ ကွီးလညျး မငျးညီရဲ့ သမီးလေး အမွနျဆုံးနကေောငျး သကျသာဖို့ ဆုတောငျးပေး ကွပါဦးနျော။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီး အားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေး တဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေး လိုကျပါတယျ။